Murti iyo Miid Q5AAD W/Q: Cabdul Cabdulkariim (Ugaaska) | Laashin iyo Hal-abuur
Murti iyo Miid Q5AAD W/Q: Cabdul Cabdulkariim (Ugaaska)
Qoraalkeena maanta ee Murti iyo Miid waxaan ku qaadaa dhigeeynaa, dib u dhaca bulshada soomaaliyeed iyo waxa ugu wacan. Waxaan nahay dad 100% muslim dunida oo dhan ma jirto waddan nala mid ah oo lagu sifeyn karo 100% dal islaam ah. marka aan ka soo tagno waayahaan danbo oo dad badan ay fidnoobeen hunguri iyo wixii u geeyay ba, haddana sidaas ay tahay waxba kama badaleeyso inaan tiradda, inaan ahaano boqolkiiba boqol, waxaan sidaa u leeyahay kan hadda masiixiga sheeganayo haddaad ku tiraahdo gaal baad tahay, waad is dagaaleysaan.
Waxaan uga dan leeyahay waxaan nahay dad hal meel ka soo jeeda dhaqan, dhalyo, dhiig iyo dheecaanba, dad wadaaga, dal, diin iyo diirba,maxaa ugu wacan inaan afar iyo labaatanka saacaddood is dilaan? is dhacaan? oo dhiigeena uu midba midka kale xalaashado.
Waxa ay ila tahay inaan nahay maqane jooge oo aan fikirin in yar oo waqtigeena ka mid ah, maxaa yeelay haddii aan fikireeyno hurdadaan dheer iyo qiyaaliga waan ka imaan laheyn. Mida kale ayaa waxa ay tahay waxa aan u baahanay hoggaan iyo hoggaamiye toosan. Hoggaan in la helaana waxaa ka horreyso in la helo hoggaamiye toosan, sidee hogaamiye toosan loo heli karaa?
Waa adag tahay in la helo hoggaamiye toosan waana halka boogta nooga taal, oo aan ka kabsan la’nahay tan qarnigii 19 aad. Waxaa nahay bulsho mugdi iyo mararoow ku nool, haddana aan is ogeyn, isla weyn oo qab been ah dhexdooda isu muujiya, balse markay shisheeyaha arkaan bisada ka itaal yar? Yaab iyo lama arag!
Waxaase wax lsla yaabo ah, in aynaan kala maarmin, oo har iyo habeen isku milanahay, haddana aynaan isku faraxsanayn oo midba midka kale cadow u arka ama lugooyadiisa ka shaqaynayso.oo waan isku dhax qasanay. Bulshadeenu waxay soo arkeen ineysan kala awood badneyn, qolona aan dalka laga rari karin, waxay soo arkeen shanta qaaradood sida looga noolyahay, dadyoow kala diin ah oo kala diir ah, haddana isku duuban.
Waxay xog ogaal ka yihiin bulshadeenu inaynu nahay dad nasiib badan, oo maxaynu ku nahay, waxaan haysanaa wax aanay aadamaha kale haysan balse aynaan ogeyn.
Dad isku wada eg
Dad isku Af ah
Dad isku dhaqan ah
Dad isku diin ah
Dad isu xigaal ah
Dal weyn oo ka badan
Bad weyn oo ka badan
Xoolaha ugu badan adduunka
Dhul beereed ka badan
Macdan ka badan oo Afrika oodhan ku filan.
Dalna intaas ma wada haysto, ogid oo ogi ee waan kugu celcelinayaa si aad u dareento waxaad haysato uguna fekerto sidaad uga faa’iidaysan lahayd.Mar kale aan is weydiino, maxaa inaga gedman? Haa waxaynaan haynin dad aqoon iyo aqool wanaagsan isugu dara bulshada oo ku jiheeya sidii nolosha loo maareyn lahaa, sidaan waxeena waxtarkiisa uga faa’iidaysan lahayn.
Waa tii aan hore kuugu sheegan, hannaan siyaasadeed oo hufan iyo hoggaamiye wanaagsan, ayaa jahawareerka waxaa looga gudbi karaa! in hoggaan iyo hoggaamiye la helo waa lagama maarmaan. Xoolaha haddii aysan Qowsaar ama Dhoobi fiican oo meesha naqa iyo doogga la raadiyo uusan raacin oo ilaalin, xoolahaas waa ruqdaan waxna laguma dheefo aan magac ka aheyn, xoolaan leeyahay aan ka aheyn. Waxaan ujeedka uga socdaa waxaan u baahanay QOWSAAR wanaagsan oo naqa, doogga iyo biyaha noo sahansha noona horseeda, soomaali maanta uma baahno mid dantiisa gaar ah ku fushada iyo mid dan shisheeya wada.
Garaadku haddaanu shaqaynin waa la gumoobaa, aan tusaale fudud ku siiyo halka talo xumadu naga hayso, waxaa da’aya roob baaxad leh, ciddina uma diyaar garoowdo oo meel lagu kaydiyo biyaha roobka lama sameysto, iska daaye wuxuu reebaa dadkiisa iyo fatahaada webiyada iyo dooxyadu hoog iyo khasaare xoog leh.
Kii shalay biyuhu sidaa u galeen laba bilood kaddib wuxuu u dhintaa oon iyo haraad! Miyaanay ahayn dhana uma roona si loo dheefsadona ma yaqaan si looga dhaaraantona ma yaqaan.
Dadka daadkii qaaday garan waayey meel ay ku kaydsadaan oo ay kaga faa’iideystaan, haddana u geeriyooday biyo la’aan maxaan ku tilmaami karnaa, dad talo xumo iyo tigaad xumo isku darsaday.
Nin beeri u baxdo oo beertiisa ka gurtey, Galleey, Sareen ama qammadi, Digir, Sisin, Haruur ama masago,waanbe iwm, ayaad arkaysaa isagoo baasto laga keenay talyaaniga karsanaya, tiisa kuma qanacsana oo waa usoo ureysa wuxuuna u arkaa wax aan loo baahneyn.
Nin badda ugu dheer Afrika leh ayaa malaay qasadeysan maya masas qasacadeysan looga keena bannaanka.
Nin xoolihiisa nool lagu qiyaasay inta u dhaxeysa 12 Malyuun ilaa 15 Malyuun ayaa caano la qasacadeeyey looga keena bannaanka oo garan waayey marka xoolaha kuu irmaan yihiin wixii cabitaanka ka hara kaydso.
Intaan iyo in ka badan ayaan haysanaa oo aan la helin cidii maareyn lahayd, kolkaad waxaaga isku filneysiiso ayaa horumar lagu tilmaami karaa, haddiise aad maalin walba tuugsato waxaad tahay dad maskax ahaan iyo maan ahaanba ka liita dadka kale.
Ma sharaf baad u aragtaa? In islaan caddaan ah oo kaneesad joogtaa sawirkaaga wax kuugu weydiiso dad waxay falayaan ay ka mid tahay inay jirkooda ka ganacsadaan oo kuwaasi kuugu deeqaan waxay halkaas ka heleen!
Ma sharaf baad u aragtaa? Intaasoo hanti ah adigoo haysta in lagugu tilmaamo sabool iyo dad waxmagarato ah aan waxba qabsan kareyn!
Ma sharaf bay kuu tahay inaad noqoto tuke cambaar leh oo ku tilmaaman, Abaar, Colaad, Aqoondarro, Saboolnimo iwm.Waxaan ku soo xirayaa qoraalka Maansada Farriin guud.
Farriin waxaan u dirayaa
Kuwa faraha badanoo
Fursad iney abuuraan
Ficilna ay sameeyaan!
Abaar lagu fidnoobiyo
Colaadahaan firkeen jaray
Walaal kala fogaadiyo
Fadqaliyo wixii dhacay
Fikir ineey u keenaan.
Kuwa fuushan faraske
Ku fadhiya kursiga guud
In foos u keenaan
Bulshadaan fir go’ayse
Fad haddaanu soo curan
La fidigi haraadkiyo
Gaajadan fatiiga ah.
La qaaday fahamkii
Fidnaduu u buun tuma
Faanka iyo beentiyo
Fataa dhug lagu dhaqo.
Dib ineey u fiirshaan
Farajac bal laga helay.
Fariin waxaan u diraya
Faralkiyo sunnaha jira
Dib iney u fiirshaan
Idilkii facaa tuug
Midka faalka beenta ah
Dadka faraqa haystee
Ku fasira jihaadkiyo
Farriin waxaan u diraya
Buro fool ku taaliyo
Fool madoow siyaasiga
Fariistaan ku leeyahay
Intaan fuudku idin gubin.
W/Q: Cabdul Cabdukariin(Ugaaska)